लाइसेन्सकाे ट्रायलमा देखियो यस्तो चमत्कार, अब के होला ? – Jaljala Online
लाइसेन्सकाे ट्रायलमा देखियो यस्तो चमत्कार, अब के होला ?
Posted on June 28, 2019 Author Jaljala Online	Comment(0)
असार १३, काठमाडौँ । लिखित परीक्षा र ट्रायल नै नलिई सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिलाउने चलखेलमा कडाइ गरेपछि नक्कली परीक्षार्थी प्रयोग हुन थालेको छ ।
यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ । मोटो रकम लिएर लाइसेन्स बनाइदिने समूहले अहिले ट्रायलमा नक्कली परीक्षार्थी पठाएर चलखेल गर्न थालेका हुन् । गिरोहले एउटाको ट्रायलमा अर्काेलाई पठाएर चलखेल गर्न थालेको प्रहरीले जनाएको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय ठूलो भर्‍याङले मात्र पछिल्लो तीन महिनामा पाँचजना नक्कली परीक्षार्थीलाई ट्रायलकै क्रममा पक्राउ गरेको छ । कार्यालयकी प्रमुख कमला थापा खत्रीले आर्थिक चलखेलकै आधारमा ट्रायलमा नक्कली परीक्षार्थी खटाउने गरेको भेटिएको बताइन् । अन्य यायायात कार्यालयले पनि नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ गर्दै आएका छन् ।
ट्रायलका क्रममा अनिवार्य रूपमा नागरिकता लैजानुपर्छ । तर, नागरिकताको फोटो पुरानो हुने भएकाले ट्रायलमा जानेको हो–होइन छुट्याउन गाह्रो हुने र यसैको फाइदा उठाएर एउटाको नाममा अर्कोले ट्रायल दिने गरेको यातायातका कर्मचारी बताउँछन् । अरूको नाममा परीक्षा दिने तथा दिन लगाउने दुवै पक्षलाई कारबाही गरिएको थापाले बताइन् ।
साउनदेखि कार्यालयकै बैंक काउन्टर
यातायातको राजस्वलाई व्यवस्थित गर्न अब यातायात कार्यालयमै बैंकको काउन्टर खुल्ने भएको छ । ठूलो भर्‍याङस्थित कार्यालयमा साउनदेखि बैंक काउन्टर खोल्न लागिएको हो । हाल यातायातका कर्मचारीले नै राजस्व लिने गरेका छन् । कतिपय यातायात कार्यालयमा यस्तो राजस्व हिनामिनासमेत भएका छन् । आर्थिक कारोबार थप पारदर्शी बनाउन कार्यालयमै बैंक काउन्टर खोल्न लागिएको कार्यालय प्रमुख थापाले बताइन् ।
त्यस्तै, भिड व्यवस्थापन गर्न टोकन प्रणाली लागू गरिएको छ । ‘अनलाइनमार्फत फर्म भर्ने र कार्यालयमा टोकन प्रणाली भएपछि बिचौलियाले खेल्ने अवसर पाउँदैनन्,’ कार्यालयका अधिकृत उपेन्द्र साहले भने, ‘यसले सेवाग्राहीलाई सहज भएको छ ।’ त्यस्तै, सेवाग्राही बस्ने ठाउँमा फ्री वाइफाई, पंखा तथा पिउने पानीसमेत व्यवस्था गरिएको छ ।
विदेशमा लिएको लाइसेन्सले मान्यता नपाउने
विदेशमा लाइसेन्स लिए पनि त्यसले नेपालमा मान्यता नपाउने भएको छ । कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीबाहेक सबै विदेशी र नेपालीमा यो नियम लागू हुनेछ । नेपालीकरणका नाममा नक्कली लाइसेन्सको कारोबार बढेपछि यहाँ पनि ट्रायल दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । तर, लिखित परीक्षा भने दिनुपर्दैन । कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीको विदेशी लाइसेन्स भने परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणित गरिदिएपछि नेपालीकरण हुने यातायात व्यवस्था कार्यालय ठूलो भर्‍याङकी प्रमुख कविता थापा खत्रीले बताइन् ।
प्रदेश ३ सरकारले ल्याएको प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी व्यवस्थामा विदेशी लाइसेन्स भएका व्यक्तिले लिखित परीक्षा दिनु नपर्ने, ट्रायल भने दिनुपर्ने उल्लेख छ । गत १८ माघमै यो व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको र अहिले लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
विगतमा विदेशी लाइसेन्सलाई नेपालीकरण गरेर नेपाली लाइसेन्स दिइन्थ्यो । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा नक्कली कागजपत्र बनाई दुई हजारभन्दा धेरै लाइसेन्स वितरण गरेको खुलेपछि नेपालीकरण गर्न रोकिएको छ ।
यस्तो छ ३ दिनको मौसम पुर्वअनुमान, कुन-कुन जिल्लामा छ बाढीको खतरा ?
साउन ११, काठमाडौं । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले मनसुनको न्यून चापीय रेखा नेपालको तराई भू–भाग भन्दा दक्षिणतिर रहेको जनाएको छ । जसका कारण नेपालमा मनसुनी गतिविधि कम सक्रिय अवस्थामा रहेको महाशाखाको भनाइ छ । हाल देशभर आंशिक देखि सामान्य बदली भई केही स्थानमा वर्षा भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार शनिबार दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य […]
होटलको नाममा यौनधन्दा, किशोरी हराएपछि खुल्यो खतरनाक रहस्य
Posted on July 18, 2019 Author Jaljala Online
साउन २, काठमाडौँ । अघिल्लो बुधबार बाराको पथलैयाबाट १७ वर्षीया किशोरी बेपत्ता थिइन् । यो खबर सुरेश बिडारीले अनलाइनखबरमा लेखेका छन् । छरछिमेक, आफन्त र चिनजान सबैतिर पुग्दा पनि केही अत्तोपत्ता नलागेपछि परिवारले प्रहरी गुहारे । इलाका प्रहरी कार्यालय, सिमराले थालेको अनुसन्धानका क्रममा किशोरी अल्पाइन अस्पतालको बेडमा भेटिइन् तर, बोल्न सक्ने अवस्थामा थिइनन् । चिकित्सकको […]
आज २०७६ असोज १२ गते आइतबार तपाईको भाग्य कस्तो छ ? थाहा पाउनुहोस्
Posted on September 29, 2019 Author Jaljala Online
आज २०७६ असोज १२ गते आइतबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिष एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ- मेष पारिवारिक सहयोग प्राप्त हुनेछ । सानो प्रयासले नै काम बन्नेछ। सुन्दर पहिरनमा मन रमाउनेछ। […]
सिरिन्ज आक्रमणले चिकित्सक नै आश्चर्यमा, अब के होला ?